Nepal Samaya | हेरक कोणबाट कांग्रेस पहिलो दल, अबदेखि नेताका बैंक खातामा निगरानी [२०७९-२-२६]
काठमाडौं- बिहीबारका मुख्य घटनाक्रमसहितको नेपाल सयम समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू:
स्थानीय निर्वाचनमा हरेक कोणबाट कांग्रेस पहिलो दल बनेको अध्ययनको निष्कर्ष, चुनावी गठबन्धन र तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनकर्ता पौडेलको भनाइ।
औसतभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्न विज्ञहरूको आग्रह, सबै पालिकामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण।
दलका केन्द्रीय नेता, सांसद र राष्ट्रपतिलगायतको बैंक खाता निगरानी गर्दै बैंक, केराउ, सुपारी, केरा र सुकेको खुर्सानी आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर र त्रिविका तालासम्मका विषयले तताए संसदीय बहस, जिम्मेवारीप्रति सरकार बफादार नभएको सत्तारुढ दलकै सांसदको टिप्पणी।
आईसीसी यु-१९ महिला टी-२० विश्वकप छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालसँग मलेसिया पराजित, ८७ रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियालाई पूरा ओभरमा ६१ रन मात्रै।
चुनावी परिणामबारे कांग्रेस
कुल ७५३ पालिकामध्ये एक पालिकाको नतिजा आउन बाँकी रहँदा कांग्रेस ३२९ पालिकाको नेतृत्वमा विजयी भएको छ भने ३०१ पालिकाको उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा विजयी भएको छ। वडाध्यक्ष पदमा पनि आफ्नो दललाई नै सबैभन्दा बढी मत प्राप्त भएको दाबी कांग्रेसको छ। वडाध्यक्ष पदमा कांग्रेसले ३८ लाख ८३ हजार १३८ मत पाएको उल्लेख छ। यो एमालेले पाएको भन्दा १ लाख ७५ हजार ७६ मत बढी हो।
कांग्रेसले गठन गरेको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरीवेक्षण उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका नेता पौडेलले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
विपदबारे तयारी थाल्न विज्ञको आग्रह
मौसमविद्हरुले यसवर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सावधानी अपनाउनका साथै तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। यसवर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर १७ लाख मानिस प्रभावित हुनसक्ने विज्ञहरुले बताइरहेका छन्। यसवर्ष नेपालमा १ हप्ताअघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ। मौसम विज्ञ, सांसद, सरोकारवाला निकायले सरकारको यस बारेमा पूर्व तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्।
जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले यसवर्ष प्रदेश १ को हिमाली भूभाग र मधेस प्रदेशका केही भूभागमा बाहेक अन्य बाँकी भूभागमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने भएकोले बेलैमा सजग हुनुपर्ने धारणा राखे। हरेक जिल्लामा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर र सुरक्षा निकायहरुलाई सजग गराएर राख्नुपर्ने अवस्थाको थालनी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपद्हरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरिन्। बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा बसोवासलाई अन्यत्रै सारेर बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले सम्भावित विपद्को सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयार रहनुपर्ने बताए। मनसुनबाट हुने क्षतिलाई अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भन्दै कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद् विदहरूले ७५३ वटा नै स्थानीय सरकारमा स्थानीय आपत्कालीन केन्द्रको व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बढी पानी पर्ने भनेको बढी पहिरो र बाढी जाने सम्भावनाको कुरा रहेकोले त्यसतर्फ सचेत रहन उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मन्त्री हेरफेरबारे छलफल
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा तीन शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मन्त्री हेरफेरका विषयमा छलफल भएको हो।
तीन नेताबीच प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावको मिति र गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीले आइतबार नै आफ्ना मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष नाम बुझाएको थियो। बाहिरिने मन्त्रीहरुकै असन्तुष्टि र बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको भन्दै देउवाले अध्यक्ष नेपाललाई केही दिन पर्खिन आग्रह गरेका थिए।
समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्न सिफारिस गरेपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपामा पनि हेरफेर हुनुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठेको छ। तीन दलमा मन्त्रीका आकांक्षीहरुले नेतृत्वलाई दबाब बढाएका छन्।
माओवादीका नेता वर्षमान पुनले मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज पार्टीमा चर्को रुपमा उठेको बताइसकेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा जसपामा पनि मतभेद तीव्र छ।
संसदमा के के भयो छलफल?
प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबारको बैठकमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ताला र रासायनिक मल अभावसम्मका विषय सांसदहरुले उठाएका हुन्। सांसद हृदयेश त्रिपाठीले किसानले मल नपाउनुले आफूलाई चिन्तित तुल्याएको बताए।
सांसद डिला संग्रौलाले सरकार जिम्मेवारीप्रति बफादार नभएको आरोप लगाइन्। समयमै किसानले मल नपाउनु, विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउनु जस्ता कुराले सरकारले जिम्मेवारीप्रति बफादार नभएको पुष्टि भएको उनको टिप्पणी छ।
सांसद पुष्पा भुसालले कोरोना बिमाको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिन्। तत्कालीन समयमा बिमा रकम दिने भनेका बिमा गरेका कम्पनीहरूले किन उपलब्ध गराएनन् भनेर उनले प्रश्न उठाइन्। सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्ने भए त्यहाँका जनताका माग पूरा गर्नुपर्ने बताए।
सांसद नवराज सिलवालले संसद्‌मा उठेको विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको गुनासो गरे। संसद्‌मा एउटै कुरा पटकपटक उठ्ने गरेको तर सरकारले संसद्‌मा उठेका कुरालाई गम्भीर रुपमा नलिएको उनले बताए। निजी अस्पतालले महँगो शुल्क लिने गरेको भन्दै यसमा अनुगमन नभएको उनले बताए।
सांसद पद्माकुमारी अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा ताला लगाइएको आरोप लगाइन्। उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनमा प्रहरीलाई साक्षी राखेर त्रिवि पदाधिकारीका कार्यकक्षमा ताला लगाइएको बताइन्। सांसद पवित्रा निरौला खरेलले संसद्‍मा मन्त्री र अरु सांसदका विषयमा देखिएको विभेदका विषयमा प्रश्न उठाइन्।
सांसद पार्वती विसुंखेले दलित विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने ललितपुरको गुरुकुललाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न माग गरिन्।
नेताका खातामा निगरानी
नेपाल राष्ट्र बैंकले राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेता, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सांसद्, उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको बैंक खाता निगरानी गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखदेखि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीको समेत बैंक खाता निगरानी गर्ने तयारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको बैंक खाता निगरानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो।
निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिको खाताको निगरानी र नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराधको उच्च जोखिमयुक्त देखिएका मुलुक, क्षेत्र तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँग आबद्ध ग्राहकहरूको समेत निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
कम्पनीको नाममा भइरहेका कारोबारमा वास्तविक खातावाल धनी तथा कम्पनीमा निर्देशन दिनसक्ने अधिकारीको खातासमेत निगरानीमा राख्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ।
४ वस्तु आयातमा हट्यो मार्जिन व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले चार प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ।
बिहीबार केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७८ नम्बर १ को बुँदा नम्बर १ को १५ संशोधन गर्दै केराउ, सुपारी, केरा र सुकेको खुर्सानीको आयात गर्न एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चिति घट्दै गएपछि यसलाई रोक्नका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद मार्जिन एलसी खोल्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले बजेटमार्फत भन्सार महसुल बढाएपछि ती वस्तुको आयात निरुत्साहित हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो।
यसअघि ती वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि सरकारले ती वस्तुको आयात बन्द गरेको थियो। तर गत फागुन २६ गते सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ती वस्तुहरुको आयात खोलेपनि नगद मार्जिन भने कायमै रहेको थियो।
अपांगताबारे शिक्षामन्त्री कुरा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका मानिसहरुलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
बिहीवार मन्त्रालयमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरुको समस्या राज्यको समस्या भएको भन्दै रोजगारी, शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा र अनुगमनको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए हुन्।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई अभिमुखीकरण, तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा अपाङ्गता भएकालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अमेरिकी सैनिक अधिकारीको भ्रमणबारे के भन्छन् माओवादी सांसद?
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र कमाण्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमणका विषयमा संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सदनलाई जानकारी नै नगराई उनको भ्रमण सुरु भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले रक्षामन्त्रीसँग उनको भ्रमणबारे जानकारी गराउन माग गरे।
यसबैची कमाण्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिन भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले फ्लिनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार दिउँसो स्वागत गरेका थिए।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा उनी काठमाडौं आएका हुन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले अमेरिकी फ्लिनको सद्भावना भ्रमण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार फ्लिनले शुक्रबार सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ।
जनरल फिलनले शनिबार माउन्टेन फ्लाइट गर्नेछन्। उनी सगरमाथा आधार शिविर जाने छन्। सोही क्रममा उनले एभरेष्ट भ्यु होटेलमा बिहानी खाना खानेछन्। उनले आइतबार नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालको भ्रमण गरेर त्यही बिहानी खाना खाने छन्।
नेपाल-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वर्षगाँठको अवसरमा दुई मुलुकबीचका उच्च अधिकारीबीच भेटवार्ता हुने भएको हो। प्रधानसेनापति शर्मा असारमा अमेरिका जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि असारमै अमेरिका भ्रमण गर्ने बताइए पनि मिति तय भएको छैन।
अब खेल समाचार
मलेसियामा जारी आईसिसि यु–१९ महिला टी–२० विश्वकप छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले मलेसियालाई २५ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको छ।
नेपालले दिएको ८७ रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर मात्र ६१ रनमात्र बनायो। कसिलो बलिङ गरेको नेपालसामु मलेसियाका लागि एल्सा हन्टेरले सर्वाधिका २८ रन जोड्नुबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकको स्कोर छुन सकेनन्। यसबाहेक एैनुर रिधवानले आठ, नुरहसिमा तजुद्दिनले सात र नुर अबेदुल समदले पाँच रनको पारी खेलिन्। बलिङतर्फ नेपालकी कप्तान कृतिका मरासिनीले दुई विकेट लिँदा मनिषाकुमारी उपाध्यायको नाममा एक विकेट रह्यो।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङमा आएको नेपालले पूरा २० ओभर खेल्दै सात विकेट गुमाएर ८६ रनको योगफल तयार गरेको थियो। नेपालकी अञ्जली विश्वकर्माले सर्वाधिक ३३ रन बनाउँदा आश्मा पुलामीले २६ रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले सम्झनलायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। मलेसियाकी नुर अबेदुल समदले दुई र एल्सा हन्टेरले एक विकेट लिए ।
जित निकाले पनि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। मलेसियाको आयोजना भएको प्रतियोगितामा नेपाल, युएई, थाइल्याण्ड, भुटान र कतारले सहभागिता जनाएका थिए। शीर्ष टोली युएईले दक्षिण अफ्रीकामा आयोजना हुने यु–१९ को विश्वकप खेल्नेछ।
प्रकाशित: June 9, 2022 | 20:10:00 काठमाडौं, बिहीबार, जेठ २६, २०७९